दैनिक तीन हजार जनाको परीक्षण सम्भव « Artha Path
काठमाडौं । सरकारले दैनिक तीन हजार स्वाब परीक्षण गर्नसक्ने गरी कोरोना भाइरस परीक्षण प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरेको छ । क्षमता विस्तारसँगै स्वाब नमुना सङ्कलनलाई तीव्रता दिने तयारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको छ ।
मुलुकमा आरटी–पीसीआर अर्थात् रियल टाइम–पोलिमरेज चेन रियाक्सन० परीक्षण गर्न सकिने ४० ल्याब छन् । जसमा निजी क्षेत्रका १५ र अन्य सरकारी स्वामित्वमा रहेका छन् । आवश्यक भएमा दैनिक छ हजार आरटी–पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने क्षमता विस्तार गरिने रजिस्ट्रार खनालले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकूसहित सरकारले छोटो अवधिमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत, सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडा, काठमाडौँ विश्वविद्यालय शिक्षा अस्पताल धुलिखेल, राष्ट्रिय गहुँ बाली अनुसन्धान केन्द्र भैरहवा, भरतपुर कोभिड–१९ डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला चितवन र बुटवलमा सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकूमा एक हजार ९६५ र उपत्यकाबाहिर ४०१ नमुना परीक्षण भइसकेको छ । आवश्यकता अनुसार परीक्षणको दायरा बढाइरहेको प्रवक्ता डा। देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले आरटी–पीसीआर र ¥यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट ९आरडीटी० दुवै विधिबाट परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। देवकोटाका अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा बुधबार मात्रै स्वाब र ¥यापिड कीटबाट गरी १९८ स्वाब नमुना सङ्कलन गरिएको छ । त्यस्तै अछाम, जुम्ला र सुर्खेतबाट सङ्कलित ८०२ नमुना काठमाडौँ ल्याइसकिएको जनाइएको छ ।
प्रवक्ता डा. देवकोटाका अनुसार धनगढीमा चार, बागलुङमा दुई र काठमाडौँमा रहेका कोरोना भाइरस सङ्क्रमित दुई जनाको विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार ‘कन्ट्राक्ट टे«सिङ’को काम सम्पन्न गरिसकिएको छ । अहिले १८० वटा स्वाब नमुनाको परीक्षण कार्य भइरहेको छ ।
वीर अस्पतालका जेनेटिक वैज्ञानिक बलराम गौतमका अनुसार ल्याबमा काम गर्ने जनशक्तिलाई तालिम दिएर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । पोखरालगायत स्थानमा ल्याब सञ्चालन र तालिम दिनुभएका वैज्ञानिक गौतमले भएको प्रयोगशाला र जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सकिए परीक्षण कार्यलाई सहज बनाउन सकिने बताउनुभयो । गोरखापत्रले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।